Alshabaab oo Afar ruux ku gowracday Ceelcali +Magacyadooda | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Alshabaab oo Afar ruux ku gowracday Ceelcali +Magacyadooda
Xoogag taabacsan Al-shabaab ayaa la soo sheegayaa iney dad ku gowraceen degaanka Ceel-Cali ee Gobolka Hiiraan.
Ciidamo Itoobiyaan iyo Soomaali isugu jira oo degaankaas saldhig ku lahaa ayaa shalay subax si lama filaan ah uga baxay halkaas ka dib markii habeen hore madaafiic lagu duqeeyey.
Wararka ayaa sheegaya in dadka xoogaga Al-shabaab dileen ay ka koobnaayeen nabadoono iyo ganacsato ka tirsanaa dadka degaanka.
Dagaalyahanada Al-shabaab oo markii danbe la wareegay degaanka Ceel Cali ayaa waxay ku eedeeyeen dadkan ay dileen oo gaaraya illaa shan ruux iney si dhow ula shaqeynayeen ciidamada Itoobiya ee halkaas ka baxay.
Mid ka mid ah odayaasha degaanka oo magaciisa ka gaabsaday ayaa saxaafada u sheegay in raga la dilay saddex ka mid ah magacyadooda la kala oran jiray Maxamed Birqaad, Maxamed Cismaan Aadan iyo Aadan Max’uud Cabdi.
Dadka degaanka ayaa sheegay in Al-shabaab ay ciidamo aad u fara badan oo boqolaal gaaraya ay soo geliyeen degaanka Ceel-cali oo 70km dhinaca galbeed kaga toosan magaalada B/weyne.
Ciidamada Itoobiya ayaa waxaa marar badan kagu eedeeyaa iney marka ay ka baxayaan degaanada ay joogaan aysan wargelinin dadkii la shaqeynayey ama la macaamilay taasoo keenta in marka ay shabaabku soo galaan ay beegsadaan dadkaas.